Iindlela entsha yokwenza iiphasiwedi | Language Centre
Posted on 26/06/2018 · Posted in Recent news
Kukho uhlobo oluthile lwenkxalabo ngalo lonke ixesha ucelwa ukuba wenze iphasiwedi entsha. Oku kungenziwa yinto yokokuba uphinda udala amanye amanani anguwe nothemba ukuba aya kugcinwa yiklawudi yekhompyutha (internet cloud) ethile. Nangona kunjalo, okungenzeka kukuba le nkxalabo yakho ivela kwinto yokokuba iphasiwedi yakho oyisebenzisayo ayindanga ngokwaneleyo, ayiqulethenga zimpawu zikhethekileyo okanye amanani awaneleyo, ayiqali ngehaiku kwaye ayipheli ngeempawu zokuqondisa.
Ingaba ungayidala njani iphasiwedi entsonkothe ngokwaneleyo ukuba ihlangabezane nazo zonke iimfanelo – kuquka nobona bude buncinane beempawu ezili-12 – KWAYE kube lula ukuzikhumbula? Impendulo: kukudlala ngolwimi.
Cinga ngento othi uyenze yonke le mihla enxulumene nexesha, umzekelo “UkuPhuma emSebenzini nge-17:00 okuThetha ukuFika eKhaya nge-:17:35”. Ngoku shunqulela esi sivakalisi: “UPS@17:00tfk@17:35”. Le yiphasiwedi eneempawu ezili-18 nekulula ukuyikhumbula kwaye ineempawu ezikhethekileyo ezimbini, oonobumba abakhulu abathathu nabancinane abathathu, amanani amane kunye nemiqondiso emibini u-@. Ukusebenzisa isivakalisi esibonakalisa ixesha kwenza ukuba kubelula ukuquka amanani neempawu ezingacingelekanga. Enye indlela, ingakukubalisa ibali lakho buqu ngokusebenzisa kwalo mthethosiseko: “NFKaPa@23Epr’1998” okungaguqulelwa njengokuthi “NdaFika eKaPa ngowama-23 kuEpreli 1998”.
Kubalulekile ukuba ugcine isivakalisi sakho silula, ke ngoko zikhuphe izichazi, njengoko ukuzikhumbula kamva kungangumngeni: ngoku ingaba ibubu”busuku obumangalisayo” okanye “ubusuku obumnandi”? Oku kunyaniseke ngakumbi xa kunyanzelekile ukuba uyitshintshe rhoqo iphasiwedi yakho. Ukuba ke kunjalo, ungadibanisa ukudlala ngolwimi nezibalo.
Xa utshintsha iphasiwedi yakho, iinkqubo zekhompyutha ezininzi ziyakuvumela ukuba uguqule nje kuphela indawana ezithile zephasiwedi yakho endala. Ke ngoko, ukuba kukuthatha imizuzu engama-35 ukugoduka, kutheni ungaphumi nge-16:30 emsebenzini? “UPS@16:30tfk@17:05”. Ungahlala unenowuthi engacacanga kwidesika yakho okanye kwidayari yakho ethi “UkuPhuma – 16:30” neya kunceda ukukukhumbuza ngexesha elitsha okungalisebenzisa kwiphasiwedi yakho entsha.
QAPHELA: Eli nqaku lisebenzisa ukwamkeleka kwesikimu sikaSchneier, nesaphuhliswa sisazinzulu ngokhuseleko uBruce Schneier ngowama-2008
Language CentreRecent newsIindlela entsha yokwenza iiphasiwedi